रियालिटी शोको अडिसनमा महिलालाई भनियो यस्तो, भयो हंगामा
काठमाडौं, १ फागुन — एउटा रियालिटी शोको अडिसनका क्रममा आपत्तिजनक प्रश्न सोधेको आरोप लगाउँदै प्राइभेट च्यानलविरुद्ध सयभन्दा बढी सहभागीले आइतवार कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
विरोधकर्ताहरूले अडिसनमा घिनलाग्दा प्रश्न गरिएको बताए । भारतको बेंगलुरुमा रहेको मल्लेश्वरको एक कलेजमा अडिसन भएको थियो र त्यसमा धेरै महिलाहरू पुगेका थिए ।
महिलाहरूको आरोप छ, ‘अडिसनका क्रममा सोधियो, तपाईंलाई सेक्सका बारेमा थाहा छ ? तपाईंअघि उभिएका पुरुषलाई किस गर्नुस् । लौ, कपडा खोल्नुस् ।’
यस्ता किसिमका भद्दा प्रश्न र आदेश सुनाइएको महिलाहरूको आरोप छ ।
अडिसनमा यस्ता आपत्तिजनक कुरा सोधिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लीक भएपछि हंगामा मच्चियो । अडिसन भएको ठाउँमा युवकहरू तथा महिलाका मातापिताहरू पुगे अनि आयोजकहरूलाई यसका बारेमा प्रश्न गर्न थाले । झगडा बढ्ने स्थिति आएपछि आयोजकहरूले तुरुन्तै अडिसन बन्द गरे ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरी पनि घटनास्थल पुग्यो ।
अडिसन दिन गएकी एक युवतीले भनिन्, ‘पहिलो राउन्डमा नै हामीलाई कपडा खोल्न र किस गर्न भनियो । यस्ता काम गरेर हामी रियालिटी शोमा भाग लिन चाहँदैनौं ।’
तिमीलाई के गर्न आउँछ भनी सोधिएको प्रश्नमा युवतीले गीत गाउन र नाच्न आउँछ भनिन् । त्यसपछि उनीहरूले यो डान्स रियालिटी शो नभएको बताए । अनि उनीहरूले सोधे, ‘तिम्रा कतिवटा प्रेमी र ब्वाईफ्रेन्ड छन् ? त्यसपछि उनीहरूले सेक्सका बारेमा थाहा छ भनी सोधे । नजिक रहेका युवकलाई किस गर ।’
‘तिमीले सबैका अगाडि कपडा खोल्यौ भने तुरुन्तै अर्को राउन्डमा पुग्छौ,’ उनीहरूले यसो भनेपछि मलाई रिस उठ्यो अनि त्यहाँबाट हिँडें, युवतीले थपिन् ।
आयोजकका तर्फबाट उषा गौडाले यी आरोपहरूमाथि प्रतिक्रया दिँदै भनिन्, ‘नछानिएका केटीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । हामीहरू कुनै हालतमा पनि यस्ता प्रश्न गर्दैनौं । केही केटीहरूले माथि पुग्न हामी जे गर्न पनि तयार छौं भन्छन् अनि उनीहरूलाई परीक्षण गर्न यस्ता प्रश्न गरिन्छ ।’